တိုက်ခန်း - t gbcondo အငှား Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: T G B Condo အငှား
🏫 လှိုင်မြို့နယ်၊ ဓမ္မာရုံလမ်း လမ်းမပေါ်ရှိ 🏫 T G B Condo အငှားခန်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ 🏫 (1050_Sqft), Fully Furnished. 🏫 Lift, 1_Bedroom, ပါကေးခင်း။ 🏫 ပြင်ဆင်ပြီး၊ Car parking, Security. 💰 စျေးနှုန်း_၅သိန်း၅သောင်း။ 🚩 ခပေါင်းလမ်းအနီး၊ အင်းယားကန်ဘောင်အနီးတွင်တည်ရှိပြီး မိသားစုနေထိုင်ရန် အထူးသင့်တော်သည်။ ☎☎☎☎ +++++++++ 09-752 7575 47, 09-7789 69 226. 09-340 185 131, 09-250 998 522.